Vivid Vision, Voice and Value: पराजुली, अदालत र म
पराजुली, अदालत र म
म २०३२ सालमा जनकपुरबाट एसएलसी दिएर रौतहटको गौरमा बुवासँगै सरेको थिएँ । हामी बसेको घर रौतहट जिल्ला अदालतकै अगाडिपट्टि थियो भने म बसेको घरबेटीका दुई छोराहरु सोहि अदालतमा लेखन्दासको काम गर्थे । यसैगरि छिमेकीका एकजनापनि अदालतमा काम गर्थे ।
यिनै घरबेटी लेखन्दासको सँसर्गमा आएर मैलेपनि फुर्सदको समयमा लेखन्दासको काम गर्न थालेँ । विभिन्न मिसिलहरुको नक्कल सार्ने, वारेसनामा लेख्ने लगायतका अदालती काम सिक्दै आफ्नो पकेट खर्च निकालिन्थ्यो र साँझ नजिकै रहेको सीमापारी बैरगनिया बजारमा सिनेमा हेर्न या किनमेल गर्न गईन्थ्यो । यो मेरो जिवनको पहिलो काम र आम्दानीको माध्यम थियो ।
अदालतमा दिनभरि अदालतका कर्मचारी सरह रहँदा त्यहाँ हुने अनेक प्रकारका लेनदेन, मुद्धाका छिनोफानो, नाङ्गा तथा गरिबहरुको रोदन र चित्कार, मुद्धा जित्नकोलागी अपनाईने विभिन्न तिकडमबाजीहरुको साक्षी बन्ने मौका जुरेको थियो । अल्लारे र काँचो उमेरको म त्यसबेला जे देख्थेँ सामान्य मान्थेँ र सहजताकासाथ लिने गर्थेँ । तर उमेर बढदै गएपछि ति अनुभवहरुले अदालत र न्यायप्रतिको मेरो धारणा नकारात्मक बन्दै गयो र अहिले त झन् पराजुली परिघटनाहरुले ति धारणाले अझ सबल हुने मौका पायो ।
माथि उल्लेख गरिएको मेरो डेरा नजिकको अदालतमा कार्यरत कर्मचारीको अदालतका तीनै न्यायधिशहरुको (न्यायाधिशहरुको जेष्ठताक्रम अनुसार १ नँ, २ नँ र ३ नँ ईजलास भनि तोकिएको हुन्थ्यो) घरमा बेलुका या साँझ परेपछि आवतजावत हुने गरेको देखिन्थ्यो । यसैगरि ति कर्मचारीको घरमा झगडियाहरुको आवतजावत देखिन्थ्यो । अधिकाँश झगडियाहरु स्वभावतः मधिसेहरु नै बढि हुने गथ्र्याे । तर यसको अर्थ स्पष्टै थियो । यि सबै आवतजावतहरु मुद्धाको लेनदेनकोलागी आवतजावत थियो । जसमा जसले बढि पैसा वा नजराना चढाउन सक्यो फैसला उसैको पक्षमा हुन्थ्यो । भोली या अर्काे कुनै दिन यसको असर अदालतमा स्पष्ट देखिन्थ्यो । यि परिघटनाहरु त्यतिखेर मेरालागी सामान्य अथवा निष्प्रभावि भए ता पनि पछिपछि अदालतप्रतिको मेरो नकारात्मक धारणा बन्दै गयो ।
हाल यता आएर पराजुलीको व्यक्तिगत भन्दापनि उनी तथा उनका प्रवृत्तिबाट हुँदै आएका कतिपय फैसलाहरु विवादित हुँदै आएका छन् । सरकारवादी भ्रष्टाचारका मुद्धामा समेत विपक्षीलाई रिहा गर्ने, धरौटीमा छोडिने या मुद्धा नै खारेज गरिएका छन् । न्यायको नाममा यसरी सर्वाेच्चको फैसलालाई कुन हदसम्म जनताले स्विकार्ने भन्ने अहम् प्रश्न उठेको छ । सँबैधानिक निकाय र न्यायपालिका भन्दैमा जनता सर्वाेपरी ठानिएको देशमा जनताले आवाज उठाउन नपाईने भन्ने कहाँ छ? तर यदि अदालतले यसरी फैसला गर्दै जाने हो र जनता चुपचाप बस्ने हो भने त न्यायको नाममा निरङ्कुशता पो ठहरिन्छ । के अदालत यतैतर्फ उन्मुख हुन खोजेको हो?
मेरो विचारमा न्यायको नाममा कानुनका रेसा केलाउनु मात्र होईन, अदालतले व्यवहारिकतापनि हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । फेरि कानुन सँधै आफैँमा पूर्ण पनि त हुँदैन ।
अदालतले आफु कानुनसम्मत हुँदाहुँदैपनि व्यवहारिकतामापनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराको उदाहरणकोलागी अमेरिकाको न्युजर्सीको अदालतको एक फैसलालाई लिन सकिन्छ । एउटी १८ बर्षकि रैचेल क्यानिँगले बाबुआमाको कडाईपन र अनुशासन सहन नसकि, बाबुआमाबाट अलग हुन पाउँ र आफ्नो खर्चको सम्पूर्ण व्ययभार पनि बाबुआमाले नै ब्यहोरुन् भन्दै घर छोडि साथीको घरमा बसेर बाबुआमा बिरुद्ध मुद्धा हालिन् । तर अदालतले यसरी वादीको दाबीलाई अदालतले मान्यता दिँदै जाने हो भने भोली यो चलनकै रुपमा स्थापित हुनसक्छ भन्दै उनको मुद्धालाई खारेज गरिएको थियो । अर्थात अदालतले वर्तमानको निर्णयले भविष्यमा स्थापित हुन सक्ने नजिरलाई ध्यानमा राखेर ति वादी केटीलाई आफ्ना परिवारसँग पुनर्मिलनको आदेश दियो । अदालतले कानुनमा के छ भन्नेमात्र ध्यान नदिई व्यवहारिकतामापनि ध्यान दिएर फैसला गर्याे । हाम्रा देशका अदालतलेपनि यस्तै फैसला गरुन् या गरे हुन्थ्यो भन्ने चाहना कतिपय अदालतको निर्णय पढेसुनेपछि यो पँक्तिकारमा पलाएका छन् ।
जिवनको यात्राक्रममा अदालतका फैसलाहरुमा अधिकाँश फैसलाहरु भ्रष्टाचारीपक्षमा भएकोबाटपनि अदालतका फैसला के प्रति उन्मुख छ भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ ।
त्यसो भन्दैमा सबै अदालतका सबै न्यायाधिशहरुप्रति मेरो नकारात्मक धारणा छ भन्ने पनि होईन । कतिपय फैसलाहरु पिडितकै पक्षमा भएको पनि पाएको छु । त्यतिबेला मेरो धारणामा धुमिलपना आउने गर्छ र केहि उज्याला पक्षहरु देख्ने गर्छु । यसैगरि मेरो स्कूलका सहपाठी नै अहिले कुनै पुनरावेदन अदालतको मूख्य न्यायाधिश छन् । उनिसँग कुरा भएको बेलामा म यि र यस्तै विषयमा कुरा हुँदा उनले आफु त्यस्तो नभएको कुरामा विश्वस्त तुल्याउँथे र म उनिप्रति खुशी हुन्थेँ । उनको कार्यपद्धतिप्रति मलाई गौरवपनि लाग्छ । भनाईको मतलब सबै न्यायाधिश, सबै अदालत भ्रष्ट छैनन् तर अधिकांश छन् भन्न भने ढुक्कै सकिन्छ |
तर, यो पक्षलाई धुलिसात गर्ने माथि उल्लेखित बहुसँख्यक घटनाहरुले भने नकारात्मक पक्षलाई नै पक्षपोषण गर्ने गरेकोले यो विचार लेख्न बाध्य तुल्यायो ।
Written & posted by मेरो विचार at 12:02:00 PM